स्वास्थ्य पेज » नेपालमा कति संक्रमित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा छन् ? नेपालमा कति संक्रमित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा छन् ? – स्वास्थ्य पेज
नेपालमा कति संक्रमित आइसीयू र भेन्टिलेटरमा छन् ?
काठमाडौं: देशभर १ हजार ६ सय ८७ जना कोरोना संक्रमित अहिले अस्पतालको आइसीयू र भेन्टिलेटरमा छन्। १ हजार ३ सय १२ आइसीयू र ३७५ जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश १ मा २०२ आइसीयू र ४९ भेन्टिलेटरमा, प्रदेश २ मा ६७ आइसीयू र १८ जना भेन्टिलेटरमा छन्। बागमती प्रदेशमा ७२४ आइसीयू र २४७ जना भेन्टिलेटरमा छन्।
गण्डकी प्रदेशमा ११४ जना आइसीयू र २७ जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनी प्रदेशमा १३८ जना आइसीयू र १९ जना भेन्टिलेटरमा, कर्णालीमा ३७ जना आइसीयू र ८ जना भेन्टिलेटरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३० जना आइसीयू र ७ जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।